सबैले कसरी लागि जिप्सम रोपेर गर्न थाह मोती बनेको हस्तशिल्प वा सानो मूर्तिहरु बनाउन लागि। समाधान को तयारी को प्रौद्योगिकी एकदम सरल छ। मुख्य कुरा हो - को घटक कुनै पनि अनुपात मा मिश्रित छन् थाहा। यो जिप्सम artefacts को निर्माण को लागि मुख्य सामाग्री हो भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ।
प्लास्टर के हो
यस प्रश्नको जवाफ अघि, कसरी हस्तशिल्प लागि जिप्सम रोपेर गर्न, भौतिक कस्तो बुझ्न छ। सबै को पहिलो यो धेरै प्लास्टिक छ। प्लास्टर सतह वस्तुतः कुनै पनि प्रकारको लागू गर्न सकिन्छ। भौतिक सजिलै प्रशोधन गर्न सकिन्छ र चाँडै कठोर हुन्छ। प्लास्टर enamels र पेंट एक संविधान रूप मा, मज्जा र कागज उत्पादन को एक घटक यस्ता मल धेरै उद्योगहरूमा लागू हुन्छ। आन्तरिक सजावटी तत्व निर्माण को लागि सामाग्री रूपमा प्रयोग गरिन्छ। अक्सर, जिप्सम निर्माण मा एक बांधन मिसिन घटक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
हस्तशिल्प लागि बोट जिप्सम देखि - सरल प्रक्रिया, यो विचार केही कमीकमजोरी सामाग्री लायक छ। यो निकै उसलाई काम सुविधा हुनेछ। मुख्यतया जिप्सम एक कम hygroscopicity र स्थायित्व छ। त्यसैले, यो सामाग्री बनेको आर्द्र वातावरणमा सिफारिस छैन सजावटी तत्व प्रयोग गर्नुहोस्। यस्तो अवस्थामा थप प्रक्रिया आवश्यक छ। विश्वसनीयता DIY तयार लागि कोटिंग तह चिस्यान देखि सुरक्षा लेपित गर्न।
तपाईंले सुरू गर्नु अघि, यो उल्लेख गर्नुपर्छ hygroscopic जिप्सम उत्पादनहरु। तिनीहरूले कुनै पनि कोटिंग अवशोषित छन्। यो यसैले सतह मा प्राइमर पत्र लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ। मात्र त चिस्यान जोगाउँछ एक कोटिंग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी हस्तशिल्प लागि जिप्सम रोपेर गर्न: अनुपात
त्यहाँ हस्तशिल्प को निर्माण को लागि निर्माण जिप्सम slurry लागि धेरै आधारभूत विधिहरू छन्। सजिलो विधि - पानी संग पाउडर प्रजनन छ। यस मामला मा, यो सबै अनुपात पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। जिप्सम को7भागहरु पानी कम्तिमा 10 भागहरु आवश्यक छ। यो छ लायक टिप्पण कि समाधान SHOULD तयार संग अत्यंत ध्यान गर्न जोगिन गांठ। यो पानी जिप्सम थप्न सिफारिस, र विपरित छ। यो विधि पनि धूलो को पुस्ता समाप्त।
यो समाधान प्रयोग गर्न सजिलो छ। यसलाई तपाईंले लगभग कुनै पनि आकार को उत्पादन गर्न सक्छन्। तर, यो शिल्प धेरै बलियो छैन भन्ने विचार लायक छ। तिनीहरूले तोड्न सजिलो र crumble छन्। हस्तशिल्प लागि बोट जिप्सम देखि?
त्यसैले, कसरी हस्तशिल्प लागि जिप्सम रोपेर गर्न। को एक सानो थप जटिल अघिल्लो समाधान को तयारी को यो विधि। तर, एक मिश्रण धेरै वर्ष को लागि आफ्नो उपस्थिति कायम गर्ने एक थप मजबूत र विश्वसनीय उत्पादनहरु को उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ।
जिप्सम को6भागहरु, पानी को 10 भागहरु, 1 भाग: आवश्यक समाधान तयार गर्न slaked कागती को। को घटक हो मिश्रित बिस्तारै सम्म एक homogeneous ठूलो।
रंग जिप्सम को उत्पादन
विभिन्न रंग मा हस्तशिल्प लागि जिप्सम रोपेर गर्न? यो आवश्यक हुनेछ:
ढक्कन संग जार।
समाधान को लागि व्यञ्जन।
चम्चा, स्पाटुला वा छडी।
मिश्रण को प्रक्रिया
त्यसैले, कसरी बहु-रंग समाधान बनेको हस्तशिल्प लागि जिप्सम रोपेर गर्न? वास्तवमा, प्रक्रिया एकदम सरल छ। सुरू गर्न पानी समाधान को तयारी को लागि एक जार gouache र आवश्यक खन्याउन छ। पूर्ण भंग रंग गर्न, यो जार र एक सानो हल्लाउने बन्द गर्न सिफारिस गरिएको छ।
रंगीन पानी समाधान को तयारी कहाँ हुनेछ एक कचौरा, मा खन्याउन गर्नुपर्छ। यो सबै बिस्तारै जिप्सम थप्न आवश्यक अनुपात अनुपालन मा छ। , पातलो धारा मा तरल स्थितिमा मा पाउडर पोख्नुहोस् निरन्तर घटक जगाएर। यो इच्छा सुनिश्चित एक वर्दी स्थिरता को मोर्टार। मिश्रण SHOULD सदृश एक मोटी क्रीम। गांठ र हावा बुलबुले जोगिन, राम्ररी तयार प्रक्रिया मा समाधान हलचल। अन्यथा, मा समाप्त उत्पादन गठन प्वाल।
कसरी सुक्खा शिल्प
अब तपाईं कसरी हस्तशिल्प लागि जिप्सम रोपेर थाहा। कति ड्राई सामान? सेट र यसको निर्माण पछि4मिनेट पछि प्लास्टर समाधान बिस्तारै कठोर हुन्छ। त्यसैले चाँडै र सही हुन काम एक तयार सामाग्री संग। पूर्ण उछाल प्लास्टर आधा घण्टामा आउँछ। समाधान बुझ्न ढिलो भएको थियो, समाधान जनावर को आधार मा एक सानो पानी घुलनशील गोंद थप्न छ।
प्लास्टर के प्रतिस्थापन गर्न सक्छ
क्षणमा हामी रचनात्मकता लागि सेट धेरै बेचे। लागि हस्तशिल्प लोरी लोरी जिप्सम र मूर्तिहरु सिर्जना गर्न अन्य सेट को सामाग्री कसरी रोपेर गर्न, सामान्यतया सधैं निर्देशन दिनुभयो। यसलाई समाधान चाँडै dries रूपमा काम सुरु गर्नु अघि पढ्न गर्नुपर्छ। यो प्लास्टर को रचनात्मकता analogues लागि केही सेट मा लागू गरियो कि उल्लेख गर्नुपर्छ। सबैभन्दा तिनीहरूलाई को साधारण - को सिलखडी।
यो पाउडर एक grayish ह्यु छ र राम्रो संरचना छ। भौतिक जिप्सम dihydrate को गर्मी उपचार प्राप्त। यो तयार समाधान संग पूर्ण बिभिन्न विशेषताहरु थियो। यो बाह्य प्लास्टर र जिप्सम धेरै समान छन् भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ।
को सिलखडी जिप्सम फरक छ
यी पदार्थ को मुख्य मतभेद बीच प्रदान गर्न छ:
सिलखडी चाँडै मिश्रण पछि grasped। त्यसैले, भौतिक मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ समाधान को तयारी समयमा additives को निश्चित संख्या बनाउन पछि। तिनीहरूले तपाईंलाई सेटिङ प्लास्टर धीमा अनुमति दिन्छ।
सिलखडी जिप्सम भन्दा कठिन सामाग्री छ। यसलाई निर्धारण गर्न सजिलो छ। यसलाई समाप्त उत्पादन स्पर्श गर्न पर्याप्त छ।
जिप्सम सिलखडी भन्दा मानव को लागि एक सुरक्षित पदार्थ हो।
सिलखडी बनेको लेख कसरी सुक्खा
विनिर्देशों मिश्रण केलाउँदा सामाग्री गर्न सक्छन् सख्त समय निर्धारण। सामान्य मा, सेटिङ प्लास्टर समाधान dilution पदार्थ पछि6मिनेट पछि अवलोकन छ। आंशिक उछाल 30 मिनेट पछि हुन्छ। यसलाई बलियो पायो कि उल्लेख गर्नुपर्छ र सुकेको समाधान5MPA को एक लोड सामना गर्न सक्षम छ। पूर्णतया प्लास्टर 1-2 दिनमा dries। यो सामाग्री थप मजबूत उत्पादन हो भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो यो सम्पूर्ण स्वास्थ्य को लागि सुरक्षित छ देखि, बच्चाहरु संग काम गर्न समाधान लागू गर्न सिफारिस गरिएको छैन। प्लास्टर, यो मामला बेहतर मा।
स्कूल hendmeydera सुरु: यार्न बाहिर एक कंगन कसरी बनाउने?
आफ्नो हातमा मास्टर Ornamental रूख
Amano झिंगा - मछलीघर मा राम्रो सहायक
रगत शुद्धीकरण कस्तो छ?
रूस र संसारमा सबैभन्दा ठूलो एयरलाइन्स यात्री कारोबारको सन्दर्भमा: सूची, मूल्याङ्कन
"Makarych" - एक दर्दनाक बन्दूक। "Makarych": समीक्षा
दुई-बर्नर विद्युत् स्टोभ - सानो कुकुरको सपना